3.1 Qaabka iMovie a
Part1: Isticmaalka saamayn Ken Burns ku saabsan MAC
part2: Isticmaalka saamayn Ken Burns on iPad ah
Part3: Sida loo Mozilla in video ah on Windows Desktop la isticmaalayo qalab ku haboon?
iMovie waa mid ka mid ah codsiga software ugu fiicnaa video qaadashada / tafatirka iibin by Apple Inc. ee qalabka macruufka. Iyada oo taageero ka codsigan mid xidhhidha abaabuli karaan video clips iyo dhigaan filimo gaagaaban ama isjiidka oo iyaga u arkaan Idin meel kasta oo ay doonayaan inay. iMovie bixiyaa qaababka dhamaystiran qaarkood, sida 'Ken Burns Saamaynta', oo waa feature aad u fudud oo anfacaya kuwa raba in ay sameeyaan ay filimo soo saaray / trailer dheeraad ah oo is-dhexgal. Maqaalkani waxa uu ku hanuunin lahaa mid ka mid ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo hawlgeli Ken Burns labada users MAC iyo iPad.
Talaabada 1: From suuqa kala guriga aad MacBook ah, aan bilowno barnaamij iMovie ka dooro video doonayo aad rabto in aad ku darto saamaynta in.
Talaabada 2: Marka aad xulo video jeclaystay, barnaamijka la muujinaya lahaa clips kala duwan / hindisaa video ka kooban yahay suuqa kala dhacdo browser ee qaybta sare dhexe ee shaashadda mashruuca iMovie. Dooro clip ah oo aad rabtid inaad codsatid Ken ayaa gubta saamayn iyo waxa ay ka dhex muuqan doonaa baahisey qaybta siladda tafatir ah.
Tallaabo 3: Ka dib markii aad ka dooran clip aad rabto in ay ka shaqeeyaan, guji badhanka "Dalag" oo loo soo square ah iyo 2 khadadka oo ku taalla Murayaad dhexe kala meesha mashruuca sare ka hooseysa. Button Tani waxay keeni doonaa "Fit," "Dalagyada," iyo "Ken Burns" saamaynta video tafatirka gal video clip ka soo xulay gudahood siladda tafatir ah.
Talaabada 4: In tafatirka screen video ah, xulo saamayn Ken Burns ee ku taala geeska bidix ee sare. Tani waxa ay noqonaysaa keeni lahaa laba laydiga mid ah midabo kala jaad ah, inta badan casaan iyo cagaar.
Talaabada 5: Waxaa oo dhan hoos timaado in boos oo ka mid ah laydiga kor ku xusan in ay soo saaraan Ken ayaa gubta saamayn. Laydi ayaa casaan loo isticmaalaa in lagu arko meel dhammaadka saamaynta halka afargees cagaaran waxaa loo isticmaalaa in lagu arko meel bilowga saamaynta, in uu yahay, halkaas oo zooming ee bilowday (laydi oo cagaar ah) iyo meesha zooming ee ugu shishaysa (laydi casaan ).
Labada of laydiga waa resizable iyo hagaajin jidaynayey ka mid ah in la isticmaalo saamaynta ay taxadirayo sare ugu.
Talaabada 6: Ka hor inta aadan kor duub wax, si xor ah u ku eegaan saamaynta ay ku dhufteen button play xaadirka ah ee suuqa kala editor video ah. Dheellitir ka laydiga iyo dhinacyada ay haddii loo baahdo.
Tallaabo 7: Riix sameeyo marka aad ku qanacsan by dadaalkaaga si uu u badbaadiyo video saxar ah. Waxaad si guul leh loo isticmaalo hawlgeli Ken gubasho.
Nidaamku wuxuu yahay sida la mid ah mid ka mid ah oo loo isticmaalo MacBook. Faraqa kaliya ee ay tahay in mid ka mid ah ma heli raaxada ee tafatirka ee iPad ah in mid ka mid ah helo iyadoo la sameynayo MacBook ah.
Talaabada 1: From saxaarad codsigaaga, garaac codsiga iMovie ka dooro video doonayo aad rabto in ay ka shaqeeyaan.
Talaabada 2: Dooro jir aad rabto in aad la shaqeeyo.
Talaabada 3: Tubada gal icon dalagga ka dibna dooro saamayn Ken Burns.
Talaabada 4: Sida lagu sameeyey MacBook ah, qabsato oo guuraan laydiga sida ay adiga iyo sida aad u rabto saamaynta in ay ka shaqeeyaan.
Talaabada 5: Guudmar clip oo ay ka dhigi hagaajin sida ilaa aad ka hesho wixii aad doonayseen.
Talaabada 6: Tubada samaysay iyo oggolaadaan codsiga si looga baaraandego video oo dhan oo wuxuu u dhiibay in la joogo gallery ah.
Zooming ku saabsan video ah oo aanay suurtogal ahayn ku media player default for Windows. Waayo, in la sameeyo suurtagal ah, mid u baahan tahay aalad awood tafatirka la zoom ah oo Mozilla hawlaha. Mid ka mid ah raad waa Movavi Video Editor. Editor Tani waa fududahay in la fahmo iyo sida loo isticmaalo.
Wixii gaawaarida ay zoom ee feature ay bixiyaan Movavi Video Editor, waa in mid ka mid raacaa talaabooyinka hoos ku fashion sax ah si loo hubiyo natiijada si mug leh.
Talaabada 1: Download iyo rakibi Movavi Video Editor on desktop.
Talaabada 2: Dooro aad file warbaahinta aad rabtid in aad wax ka bedel. Marka la doortay, jiidi faylka guddiga waqtiga.
Talaabada 3: Dooro Murayaad Raadka, ka dibna u beddesho oo guji zoom in-baxay. Aagga image aad rabto saamaynta in lagu dabaqo hagaaji.
Talaabada 4: Haddaba Murayaad goobaha, qabsato zoom ee macaanaa iyo Mozilla ka soo koobin macaanaa in boqolkiiba. Waxgarashada, haddii aad u dhigay zoom ee macaanaa 0, waxaad heli doontaa zoom ka soo baxay wax saameyn ah ee aad video iyo ku xigeenka qeybsanaan.
Talaabada 5: Ka dib markii ay u fidinno koobin, marka laga reebo clip marka aad dareento ku qanacsanayn ay Falanqeynta.
Way fududahay in la Mozilla sidan. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad si fudud u jeclaan doonaa iMovie, sababtoo ah waxa ay wax badan oo ka sii fudud loo sameeyo. Oo Wondershare ee Video Converter, uma baahnid inaad wax laga walwalo wax dhibaato video, mar dambe.
Sida loo dhigay muuqa on Mac / iPhone / iPad
Downlaod Version kasta oo iMovie - Halkan yahay!
> Resource > iMovie > Sidee Mozilla ee ku iMovie on Mac / iPad